भूषिता वशिष्ठ - कान्तिपुर समाचार
यज्ञश दाइले युवा नाटयकर्मीका रूपमा केही लेख्न भन्दा मैले झट्ट हुन्छ भन्न सकिनँ । कहिलेकाहीँ मलाई लाग्छ, जिन्दगी एउटा विशाल ‘म्युजिकल चियर’ खेल हो । यहाँ असंख्य कुर्सीहरू छन्, असंख्य कुर्सीहरूमा असंख्य लेबलहरू छन्– भरिया, डाक्टर, सूचीकार, पत्रकार, कलाकार, फलानाकार, ढिस्कानाकार, यावत् यावत् ।
गौरी र काली
हाम्रा मिथहरूमा अनौठो लयात्मकता छ, जो हाम्रो एकाकी संस्कृतिवादी समाजले अनुसरण गर्न सक्तैन । नवदुर्गाको मिथमा गौरी र काली सतहमा विपरार्थी देखिए पनि वास्तवमा एउटै देवीका स्वरूप हुन् । स्वच्छन्द, निर्भीक र स्वाधीन नहुन्जेल स्त्रीमा वास्तविक ममत्व, करुणा र स्निग्धता सम्भव छैन ।
‘धर्ती नफाटुन्जेल सहिराख’
निर्मला मरेरै गइन्, तैपनि न्याय यस्तो महँगो छ कि उनको मृत्युले पनि त्यसको मूल्य चुकाउन सकेन । अब सीताको मात्रै हैन, पञ्चकन्याको पनि कहानी सुनाऊँ । यी पाँच कन्या (अहिल्या, द्रौपदी, कुन्ती, तारा र मन्दोदरी) न हाम्रो पारम्परिक हिसाबमा कुमारी थिए, न नै आफ्नो नियतिका मूकदर्शिका । यी सबै महिलाको आफ्नो लोग्नेबाहेकको परपुरुषसँग संसर्ग थियो । सीता त एकपुरुषा थिइन् । उनलाई किन पञ्चकन्या म राखिएन ? कौमार्य भनेको के हो ? पाँच लोग्नेकी पत्नी द्रौपदी कसरी कुमारी भइन् ?
केही दिनअघि मात्रैको कुरा हो— मेरो एक परिचितले घरमा खाना खान बोलाउनुभयो । त्यसो त मलाई खासै यस्ता जमघटमा जान मन लाग्दैन तर फोनमा उहाँको आवाजमा नजानिदो किसिमको थकान थियो । स्पष्ट आग्रह खानाको भए पनि कताकता ‘गुहार खोजे’ जस्तो गरेर उहाँले भन्नुभयो, ‘आऊ है । धेरै कुरा भन्नु छ ।’
भूषिता वशिष्ठका लेखहरु :